बोल्ड टाइपोग्राफी को उदय | अनलाइन क्रिएटिभहरू
बोल्ड टाइपोग्राफी को उदय
आइरिस गेमन | | प्रेरणा
पक्कै पनि धेरै अवसरहरूमा, तपाईंले अवस्थित हजारौं फन्टहरू बीचको खोजीमा घण्टा बिताउनुभएको छ, सबैभन्दा उपयुक्त वा तपाईंको परियोजनाको लागि उत्तम काम गर्न सक्ने एउटा फेला पार्न। र जब तपाइँसँग पहिले नै यो छ, तपाइँ यसलाई लागू गर्नुहुन्छ र यो तपाइँले सोचेको जस्तो छैन। यो हामी मध्ये धेरै भएको छ। यो कारण हो हामीले चयन गरेका फन्टहरूले तपाईले आफ्नो कामको साथ व्यक्त गर्न चाहनुभएको कुरा व्यक्त गर्दैन।
फन्टहरू, रङहरू जस्तै, पनि फरक व्यक्तित्व र शैलीहरू छन्। कुन छनौट गरिएको छ भन्ने आधारमा, एउटा सन्देश वा अर्को पठाउन सकिन्छ। त्यसैले, यस पोस्टमा हामी तपाईसँग बोल्ड फन्टहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौं, जहाँ तपाईले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईलाई केहि टाइपोग्राफिक संयोजनहरू दिनेछौं जुन कहिल्यै असफल हुँदैन।
1 बोल्ड फन्टको उद्देश्य के हो?
2 बोल्ड टाइपोग्राफी को सफलता
3 बोल्ड टाइपोग्राफी, ठूलो वा कम आकार
4 टाइपोग्राफिक संयोजन तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ
4.1 Helvetica Neue र Garamond
4.2 व्यापार गोथिक र सबोन
4.3 कुरियर र मोन्टसेराट
4.4 Baskerville र Akzidenz Grotesk
बोल्ड फन्टको उद्देश्य के हो?
फन्टहरूले हामीलाई संवेदनाहरू पनि पठाउन सक्छन्, त्यसैले यो आवश्यक छ हाम्रो आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त टाइपोग्राफी शैली कसरी छनौट गर्ने भनेर जान्न कामहरूमा। तसर्थ, हामीले फरक पार्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको हामी के व्यक्त गर्न चाहन्छौं, त्यो हो, गम्भीरता, निकटता, आधुनिकता, आदि।
एक ग्राफिक डिजाइन मा प्रवृत्ति, बोल्ड फन्ट को प्रयोग हो वा बोल्ड भनेर पनि चिनिन्छ। यो भेरियन्ट, क्यारेक्टरहरू भित्र, सबैभन्दा मोटो र गोलो हुन्छ, जसलाई नियमित भनिन्छ।
बोल्ड फन्टहरूमा, हामीले फेला पार्छौं कि तिनीहरूको तेर्सो अक्ष ठाडो अक्ष भन्दा बाक्लो छ जुन लगभग उस्तै रहन्छ। अक्षरहरूको स्ट्रोक चौडाइमा विस्तार हुन्छ, उचाइमा होइन।
तपाईंले अवसरमा देख्नुभएको हुन सक्छ, फन्ट डाउनलोड गर्दा, ती सबैसँग यो तौल संस्करण हुँदैन, ती सबै बोल्ड हुँदैनन्। यो भेरियन्ट, यदि तपाईंले यसलाई फेला पार्नुहुनेछ, फन्टहरूमा मध्यम घनत्व वा शीर्षकहरू भएका पाठहरू पढ्नको लागि विशिष्ट, यद्यपि धेरै अवसरहरूमा यी नियमहरू तोडिएका छन्।
बोल्ड शब्द एंग्लो-स्याक्सन संसारबाट आएको हो, तर हामीलाई पहिले नै थाहा छ कि हामी साँच्चै अंग्रेजीमा शब्द मनपर्छ, तर यो सबै जीवनको कालो.
बोल्ड टाइपोग्राफी को सफलता
अक्षरको वृद्धिको लागि धन्यवाद, यसले नेतृत्व गरेको छ टाइपोग्राफी एक अपरिहार्य तत्व भएको छ र यो यसको सबै भन्दा राम्रो छ। यसको मतलब यो होइन कि यदि तपाइँ लेटरिङ टेक्नोलोजीलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्न भने तपाइँ यो संसारमा हुनुहुन्न, हामीसँग पूर्व-डिजाइन गरिएका अक्षरहरूसँग काम गर्दा पनि अन्तर छ।
टाइपोग्राफीको प्रयोगमा क्रान्ति ल्याएको अर्को प्रवृत्ति हो अधिक minimalist डिजाइन तिर झुकाव, किनकि फन्टहरू रचनाहरू र सबै आँखाहरूको केन्द्र बन्छन्।
बोल्ड प्रकार, ठूलो तिनीहरूले जनताको ध्यान आकर्षित गर्न, राम्रो भन्नुहुन्छ। द टाइपोग्राफी, लोगो डिजाइन, पोस्टर, वेब पृष्ठ, ब्रोशर, आदि को मुख्य तत्व हो।। कुनै पनि समर्थन। यी प्रसिद्ध, टाइपोग्राफिक डिजाइनहरू, डिजाइनहरू हुन् जहाँ फन्टमा रचनाको सबै प्रमुखता हुन्छ।
बोल्ड टाइपोग्राफी, ठूलो वा कम आकार
एक बढ्दै गएको प्रवृत्ति, धेरै ठूला आकारहरूमा टाइपोग्राफीको प्रयोग हो, रचनाका पाठहरूलाई व्यक्तित्व दिन र वरपरका तत्वहरूबाट प्रमुखता हटाउन। यसले टाइपोग्राफीलाई जनताको ध्यानको केन्द्र बनाउँछ।
हामीले यो प्रविधि पोस्टर, ब्रोशर वा फ्लायरमा मात्र देख्न सक्दैनौं, यो लोगोको निर्माणमा पनि प्रयोग गरिन्छ। धेरै ब्रान्डहरू आफ्नो सन्देश छतबाट चिच्याउन चाहन्छन्, कि तपाईको लोगो जनताको लागि मात्र होइन, यो तपाईको वरपरका सबै प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा माथि खडा छ।
बोल्ड टाइपोग्राफीको प्रयोग, हामी यसलाई अनगिन्ती समर्थनहरूमा देख्न सक्छौं हामीले पोस्टर, लोगोमा, तर वेब पृष्ठहरूमा वा प्रचार वा कार्यक्रम ब्रोशरहरूमा पनि देख्यौं।
वेब पृष्ठ डिजाइनमा, पाठको प्रयोग जानकारीपूर्ण हुन्छ, जसले यसलाई डिजाइनको आधारभूत पक्ष बनाउँछ। वेब पृष्ठ बनाउँदा, यो स्पष्ट हुनुपर्छ कि पाठ छोटो र सीधा हुनुपर्छ, पढ्दा सुपाठ्य हुनुको साथै।
केही डिजाइनरहरू, दुबै ग्राफिक र वेब, बोल्ड टाइपोग्राफीसँग पाठहरूको स्पष्टतालाई सम्बद्ध गर्नुहोस् र ठूला आकारहरूमा, २० अंक भन्दा माथि सबै कुरा। यसो गर्दा नदेखेको वा पढेबिना केही रहँदैन ।
टाइपोग्राफिक संयोजन तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ
यदि तपाईं बोल्ड टाइपोग्राफीको यो प्रवृतिमा सामेल हुन एक कदम नजिक हुनुहुन्छ भने, तर तपाईं टाइपोग्राफिक छनोटको बारेमा धेरै स्पष्ट हुनुहुन्न भने, चिन्ता नलिनुहोस्, हामी तपाईंलाई केही दिनेछौं। टाइपोग्राफी संयोजनहरू तपाईंको डिजाइनहरूमा सफल हुन, र तपाईंसँग अब अँध्यारो पक्षमा नफर्कने बहाना हुनेछैन।
टाइपोग्राफिक संयोजनहरूको बारेमा कुरा नगरी ग्राफिक डिजाइनको बारेमा कुरा गर्न असम्भव छ। र त्यो हो, टाइपोग्राफीसँग डिजाइनलाई उचाल्ने वा यसलाई पूर्ण रूपमा डुबाउने शक्ति हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि यो फेला पार्न सजिलो छैन, धेरै अवसरहरूमा, फन्टहरूको विजयी संयोजन, हामी तपाईंलाई हात दिनको लागि केही ल्याउँछौं, बोल्ड फन्ट कहाँ प्रयोग गर्ने यो तपाईंको आफ्नै निर्णय हो।
Helvetica Neue र Garamond
हामीले उत्कृष्ट क्लासिकको साथ सुरु गर्यौं, तर त्यो मध्ये एक हो उत्कृष्ट काम गर्ने फन्ट संयोजनहरू, तपाईंले सधैं टाउकोमा कील ठोक्नुहुनेछ। यो धेरै मौलिक छैन, तर धेरै अवसरहरूमा तपाईंले यसलाई सुरक्षित खेल्नुपर्छ। यस अवस्थामा हामी शीर्षकहरूको लागि हेल्भेटिका न्यु र पाठ ब्लकको लागि गारामन्ड प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं।
व्यापार गोथिक र सबोन
एक सुरक्षित शर्त हो कि फन्टहरू मध्ये एक ट्रेड गोथिक हो र यदि तपाइँ Sabon जस्तै सेरिफ टाइपफेस संग संयोजन बनाउनुहुन्छ, उत्तम संयोजन। यस अवस्थामा हामी तपाईंलाई अघिल्लो खण्डको विपरीत गर्न सुझाव दिन्छौं। सेरिफको साथ टाइपोग्राफी, शीर्षकको लागि सबोन, र निम्न पाठको लागि sans-serif।
कुरियर र मोन्टसेराट
हामीले हाम्रो अर्को पोष्टमा छलफल गरिसकेका छौं, त्यहाँ धेरै प्रेमीहरू छन् टाइपराइटर टाइपोग्राफी, र यो एक कुल प्रवृत्ति हो। यो टाइपोग्राफी शैली, मोन्टसेराट संग संयुक्त, सफलता को ग्यारेन्टी।
Baskerville र Akzidenz Grotesk
विजयी संयोजन, तपाईं जुन तरिकाले हेर्नुहुन्छ। सेरिफ टाइपफेस जस्तै Baskerville, sans-serif टाइपफेस जस्तै Akzidenz Grotesk, सही कन्ट्रास्ट। एउटा संयोजन जुन तपाईंले उपयुक्त देख्नुभएको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो अवस्थामा हामी शीर्षकहरूको लागि सेरिफ र पाठको लागि sans-serif प्रयोग गर्नेछौं।
हामीले एक सय प्रतिशत संयोजनहरू रोकेका छौं, तिनीहरूको बोल्ड संस्करणमा फन्टहरूका साथ हजारौं संयोजनहरू, स्थापित भएको कुरालाई तोड्न र डिजाइनहरूलाई नयाँ रूप दिन।
यहाँबाट हामी तपाईंलाई यस अँध्यारो संसारमा डुब्न आमन्त्रित गर्दछौं, र बोल्ड फन्टहरूको प्रयोगको साथ रूफटपबाट चिच्याउने कामहरू सिर्जना गर्न सुरु गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » बोल्ड टाइपोग्राफी को उदय
Photoshop मा Duotone प्रभाव छविहरू कसरी सिर्जना गर्ने
म्यागजिन लेआउटहरू तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ